TikTok: Walwal makugu haysaa in aad aaminto bartan laga leyahay Shiinaha? | Hangool News
TikTok: Walwal makugu haysaa in aad aaminto bartan laga leyahay Shiinaha?
November 8, 2019 - Written by Hangool News 1
TikTok waxaa la rumeysan yahay in 500 oo milyan oo qof ay si joogto ah u isticmaalaan, daafaha caalamka oo dhan. Kuwa ugu badan waa dhowr iyo toban illaa 20 sano jirro.
Bartan oo muuqaallo yaryar oo kooban la geliyo waxaa aasaas u ah waxyabaha la xiriira muusikada.
Tusaale, dhallinyrada waxay usoo lebisanayaan sida ay doonayaan, ka dibna muuqaal ayey iska duubayaan iyagoo hees dhageysanaya – muuqaallada noocaas ah waxay gaaraan meelo fogfog.
Balse siyaasiyiinta qaar walwal ayay ka qabaan bartan oo Shiinaha laga leeyahay in ay halis amni leedahay.
Sidoo kale, hay’adaha eega arrimaha Baraha Bulshada waxay muujiyeen sida ay shaki uga qabaan badqabka bartan.
Bartan TikTok, waxay ka mid tahay baraha bulshada ee loollanka adag ku haya Facebook oo hadda ay midka loogu isticmaalka badan yahay.
Haddaba, App-kan halis ma yahay, ama dareenka ku saabsan TikTok waa duufaan ku xiran koob dhexdiisa?
Sidey Bartan u shaqeysaa?
Dadka – oo u badan dhallinyaro – waxay barta u adeegsadaan in ay soo dhigaan muuqaal 15 il-briqsi ah. Qaarkood heeso ayay dhageysanayaan, kuwana majaajilo iyagoo adeegsanaya farsamooyiin aan caadi ahayn oo muuqaalka ay ku jarjaraan.
Muuqaalkaas wuxuu gaarayaa asxaab ay dadkaas garanayaan iyo kuwa aan la aqoon. Sida caadiga ah, dhammaan cinwaannada waa kuwo qof kasta uu daawan karo, in kastoo qofka cinwaanka sameysta uu dadka qaar ah ku soo darsan karo.
Falanqeynta ku saabsan sida aad marksta daawato ama si gaar ah aad ugu xiiseyso waxyaabaha qaar, ayuu TikTok kuusoo bandhigayaa xillikasta, wayna fududahay in aad xakameyn waydo codadka iska soo daba shanqaraya.
Sidoo kale dadka isticmaala waxay raadin karaan muwduucyo gaar ah ama dad ay xiiseeyaan iyagoo ku dhufanaya hashtag-ga.
TikTok wuxuu sidoo kale leeyahay qaab farriimo gaar ah la isugu diro, taasna waxay ku kooban tahay dadka asxaabta oo keli ah.
Qofkasta oo ka weyn 13 sano ayaa adeegsan karo iyadoo waalidka ay xakameynayaan.
Shirkadda kuma cusba in muran ay dhexda u gasho. Sannadkii la soo dhaafay, si kumeelgaar ah ayaa Hindiya looga xannibay. Baaritaan Mareykanka uu sameeyay oo ahaa ka hortagga sirta la xado ayaa sababay in $4.3 milyan oo dollar lagu ganaaxo ka dib markii “si ula kac ah ay u martigeliyeen waxyaabo ay soo bandhigeen carruur yaryar”.
Maxay dadka qaar uga walwalsan yihiin in xogtooda ay TikTok ku aaminaan?
Dadka dhalleeceeya ee Mareykanka ku nool waxay sheegayaan in App-kan ay suurtagal tahay in uu ka tanaasulo “macluumaadka u gaarka ah” dadka adeegsada.Xuquuqda Sawirka @alexstamos@ALEXSTAMOS
Alex Stamos, oo ahaan jiray madixii amniga Facebook, haddana ah macallim wax ka dhiga jaamacadda Stanford, wuxuu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in uu walbahar ka qabo wararka soo baxay ee diidmada Mareykanka iyo shaqaalaha Shiinaha.
Xubno horey uga mid ahaa koxda faafreebka Mareykanka waxay sheegayaan in asxaabtooda ku sugan Shiinaha ay ku soo wargeliyeen in ay hoos u dhigaan muuqaallada aalaaba ah xadgudubka ee Mareykanka ku saabsan, sidaas waxaa lagu qoray warbixin lagu daabacay Washington Post.
Muuqaallada la tiray waxaa ka mid ahaa dhunkasho aan caadi ahayn, qoob ka ciyaar aan wanaagsanayn iyo doodo siyaasadeed.
Dadka qaarna waxay ka walwalsan yihiin in Shiinaha uu amri karo in Baraha Bulshada ay maamulka u ogolaadaan xogta isticmaalayaasha.,
Sidey TikTok uga hortageysaa hadalladaas?
Shirkadda waxay sheegeysaa in ay bedeshay qaabkii ay u shaqeyneysay, sannadkan 2019-ka.
Waxay bilowday adeegsiga shuruuc la xiriirta qof kasta iyo isticmaalkiisa oo ay ugu talagashay dhammaan suuqyadeeda caalamiga ah – balse hadda habka go’aan ka gaaridda Mareykanka gudaha dalkaas ayaa laga maareeyaa.
Vanessa Pappas, Agaasimaha Guud ee TikTok ee dalka Mareykanka wuxuu BBC u sheegay: “Joogteynta koboceena degdegga ah iyadoo la eegayo, waxaan sii hormarineynaa awooddeena iyo madaxbannaanida kooxda Mareykanka ku sugan.”
Waxaa intaa dheer, Shirkadda waxay shaqaaleysiisay koox kale si ay ula socdaan in xogta dadka aan loo gudbin Shiinaha, si App-kale oo aan ogolaansho haysan aysan ugu xirmin TikTok oo aan loo xadin macluumaadka.
Iyadoo taas ay jirto haddana waxaa dhici karta:
in barta laga xannibo Mareykanka oo ay ku leedahay 26.5 milyan oo qof oo isticmaala TikTok
TikTok waxay noqon kartaa shirkad kale oo fadhigeedu yahay meel ka baxsan Shiinaha
ama Bytedance in ay TikTok ka iibiso shirkad kale oo teknolojiyad
TikTok waxay sidoo kale wajeheysaa baaritaan sharci oo dhanka Britain ah.
Madaxa arrimaha mcluumaadka ee UK Elizabeth Denham waxay xaqiijisay Bishii July in ay baareyso sida TikTok u adeegsado xogta carruurta.